बेलायत बसेर दुई दशकदेखि नाट्यकर्म | We Nepali
२०७५ वैशाख २२ गते ११:५५
लन्डन । ‘हाइटेक सिनेमा हेर्न त फूर्सद ननिकाल्ने जमातलाई नाटकतिर आकर्षित गर्न कम चुनौति छैन्’, लन्डनवासी रंगकर्मी सनमकुमार बैराग बेला बेला नाट्यकर्मबाट विचलित नहुने होइनन् । तर, फेरि सोच्छन्, ‘सबैले वेवास्ता गर्ने हो भने विदेशमा नेपाली नाटकको हालत झन् के होला ? त्यसकारण यसलाई त बचाउनु पर्छ ।’
ऐतिहासिक कथावस्तुको नाटक ‘भिमसेन थापा’ लन्डनमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् सनम । उनले निर्देशन र अभिनय गरेको उक्त नाटक आगामी १२ र १३ मे दुई दिन लन्डन साउथ हयारोस्थित हयारो बरो फुटबल क्लवमा मञ्चनको तयारी छ । भिजन संसारको प्रस्तुति हो भिमसेन थापा । एक घण्टा दश मिनेट लामो उक्त नाटकमा सनम, दुर्गा गुरुङ, सुरेश श्रेष्ठ, अभिषेक र सुसान गुरुङको अभिनय छ ।
‘समय दृश्य’ र ‘जीगिषा’ नाटकको सफल प्रदर्शन अघि सनमले ‘भानुभक्त’ को छोटो नाटक समेत गरेका थिए बेलायतमा । त्यो नाटक हेरेर प्रभावित वरिष्ठ सञ्चारकर्मी खगेन्द्र नेपालीले सनमलाई ‘भिमसेन थापा’ पनि बनाउन सुझाए । दुबसु क्षेत्री नेशनल डेभलप्मेन्ट फाउण्डेशनले निकालेको सिद्धिचरण श्रेष्ठको ‘भिमसेन थापा’ कृतिलाई अडियो बुक बनाउंदै थिए खगेन्द्र ।
‘शुरुमा कृति पढ्दा त अप्ठेरो लागेको थियो । म आफ्नै ढंगले बनाउंछु भनेपछि खगेन्द्र दाईले मान्नुभयो’, सनम भन्छन्, ‘भिमसेन थापाले जेलमा आत्महत्या गर्न खोजेपछिका ९ कष्टकर दिनबारे यो नाटक केन्द्रित छ । यसमा उतारचढाव, हांसो र वियोगका दृश्य रहनेछन् ।’
सनमको उक्त नाटकलाई बढावा दिन ‘ए स्टार फाइनान्सियल सोलुसन्स् यूके’ मेरुदण्डका रुपमा छ । उक्त कम्पनीका सञ्चालक मिन दर्लामी बेलायतमा नेपाली कला, संस्कृतिलाई संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरुप भिमसेन थापा नाटकलाई आर्थिक प्रायोजन गरिएको सुनाउंछन् ।
सन् १९९९ मा बेलायत आए सनम । स्कटल्याण्डमा कल्चरल कार्यक्रम गर्न आएका थिए उनी । त्यसयता बेलायत रहेका उनले यहां पनि उनले आफ्नो कलाकारिता त्यागेका छैनन् । नेपाल र नेपाली कला संस्कृति एवं भाषा उनको मस्तिष्कमा चट्टान जस्तै अडिएको छ ।
नेपाल छंदा सन् १९९० को दशकमा अभिनयमा खुबै व्यस्त भए सनम । उनका शुरुवातका दिन रोचक रहे । नाट्यश्वर कला निकेतनमा अभिनय सिक्न गएका उनी सिट नपाएर डान्समा पो भर्ना भए । क्लासिकल डान्स लेभल टु सम्म गरे । तर, डान्स आफ्नो लाइन नभएपछि अभिनयतिरै लागे सनम । कथा, कविता पनि लेख्थे उनी । सानै देखि अभिनयको नक्कल गर्ने, साथीभाइमाझ जोक सुनाएर हंसाउने उनको स्वभाव थियो ।
नाट्यश्वर कला निकेतनमा अभिनय सिक्दै जांदा नाटक गर्ने निष्कर्षमा पुगे उनी र साथीहरु । सन् १९८५ तिर हुनुपर्छ, पहिलो नाटक ‘सत्यनास’ गरे जुन ४५ मिनेट लामो थियो । त्यतिबेला उक्त नाटक राष्ट्रिय नाचघरसहित विभिन्न ठाउंमा ४५ वटा शो गरिएको उनी सम्झन्छन् ।
पहिलो नाटक नै सफल भएपछि उनी झन् हौसिए । राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा भाग लिए धेरै पटक । साहित्यकारको रचना कति महत्व हुन्छ भन्ने विषयको ‘एक अन्तकारी’ नामक नाटक गरे साथीहरुसंग मिलेर । नाटक लेख्ने, खेल्ने दुवै गर्थे उनी ।
नाटक गरेर मात्र भएन, यसबाट राष्ट्रका लागि केही दिन सकियोस् र आत्मसन्तुष्टि पनि हुनुपर्छ भनेर सन् १९९० मा राष्ट्रिय टेवा कार्यक्रम शुरु गरे सनम र साथीहरुले । हरेक वर्ष गरिन्थ्यो त्यो कार्यक्रम । ‘पहिलो कार्यक्रम सन् १९९० मा सार्क बालिका वर्षका रुपमा गरेर ‘इतिहासको पाना पल्टिसकेको छ’ नामक नाटक देखायौं । अर्को वर्ष बन जंगल, वातावरण र हाम्रो दायित्व थिममा ‘विश्वको अधुरो उपन्यास’ नाटक देखायौं । एड्सबाट बचौं र बचाउं भन्ने सन्देशको ‘कालो रगत’ नामक नाटक पनि गरयौं’, सनम विगत सम्झन्छन्, ‘डिमाण्ड बढेपछि ‘एड्स भाग २ पनि गरयौं फ्रेन्च कल्चर सेन्टरमा ।’
रमेश शाहीले निर्देशन गरेका हरेक टेलिसिरियल सनमले लेख्थे र संगै अभिनय पनि । ‘बाउको बिहे’, ‘स्वयम्भूको आंखा’, ‘सम्भव असम्भव’ सिरियलको पटकथा, संवाद र अभिनय सनमको थियो । ‘सम्भव असम्भव’ को त गीत पनि लेखे उनले जसलाई आनन्द कार्कीले गाएका थिए ।
उनको ‘यथार्थ यात्रा’ नामक सिरियल नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भयो । उक्त सिरियलमा योगेश वैद्यले गाएको ‘रोएर मन छल्केका छन् आंसु…’ उनैले लेखेका थिए । त्यसो त कुमार कान्छा, प्रेमध्वज प्रधानले समेत गाएका छन् सनमले कोरेका गीत ।
नेपाली नाटकमात्र होइन, बज्र होटलमा उनले अंग्रेजी नाटक ‘द टेम्पेस्ट’, लगायत कयौं गरे । फ्रेन्च कल्चर सेन्टरमा आवद्ध भएर कयौं नाटक गरिएको सनम सम्झन्छन् । त्यतिबेला सुवर्ण थापा, शोभा चन्द, किशोर डंगोल र सनमले फ्रेन्च भाषा सिक्न र फ्रान्स भ्रमणको ‘स्कलरसिप’ पाए । फ्रान्स गएर त्यहां करिब साढे तीन महिना नाटक र वर्कसपमा भाग लिए । ‘फ्रान्स गएर हामीले धेरै सिक्यौं । स्क्रिप्ट बिना वर्कसप गरेर पनि नाटक बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सिकियो’, सनम भन्छन्, ‘वास्तवमा हामीले गर्ने नाटकको ट्रेन्डमा नै परिवर्तन आयो । पश्चाताप, बरालिएका पाइलाहरु, बोधीसत्व (नेवारी र नेपाली) नाटक स्क्रिप्ट बिना गरियो ।’
बोधीसत्व बौद्ध सम्मेलन पोखरामा पनि देखाइएको उनले स्मरण गरे । सनमको निर्देशनमा बनेको ‘अजात शत्रु’ नाटक खुब चलेको बताउंछन् उनी । उनले ‘उदमबरा’ नेवारी नाटक पनि गरे बौद्ध विहारमा । उनी आफैंलाई बढि चित्त बुझेको नाटक रहेछ त्यो ।
‘जंगबहादुर’ टेलिसिरियल गर्न लाग्दा सनम बेलायत आए । बेलायत आएर पनि सनमको नाटयकर्म रोकिएन । सन् २००० तिर ‘माइन्ड द ग्याप’ नामक नाटक देखाएको हेक्का उनलाई छ । द्वन्द्वकालिन विषयमा केन्द्रित थियो उक्त नाटक । त्यतिबेला कलाकार विस्थापित भइरहेको वास्तविकतालाई उतारेका थिए उनले । प्लमस्टिडमा उक्त नाटक देखाउंदा भने सनम बडो दुःखी भए । ‘नाटक देखाउंदा दर्शकलाई वास्तै छैन् । खाने पिउने, बारतिरको हल्लाले डिस्टर्ब भइरहेको छ । कलाकारको सम्मान, इज्जत नै नगर्ने । यस्तो देखेपछि मेरो मनै मरयो’, सनम पुरानो दिन सम्झन्छन्, ‘ब्रिटिश, फ्रेन्च नाटकमा कस्तो सम्मान र इज्जत हुन्छ कलाकारको । नेपालीले भने नाटक हेरुन्जेल पनि कदर नगर्ने देखेर त्यतिबेला मलाई दुःख लाग्यो ।’
लन्डनमा रहंदै गर्दा भारती भवनले ‘भागवत गीता’ नाटकमा अभिनय गर्न अफर गरयो उनलाई । सनम अडिसनमा गएका थिए आयोजकले तुरुन्त छानिहाले । सनमले त्यसमा दुर्योधनको रोल गरेका थिए जुन नाटक बेलायतका २५ शहरमा देखाइएको थियो ।
‘त्यसपछि हामीले पनि यस्तै गरि नेपाली नाटकलाई विस्तार र विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो’, सनमले सुनाए, ‘यही क्रममा तेन्जी पाख्रिनले भूकम्प गएको विषयमा नाटक बनाऔं न भन्नुभयो । मैले शुरुमै पैसा चाहिं आउन्न तर गरौं भनेपछि उहां जोखिम लिन राजी हुनुभयो र समय दृष्य बनाइयो ।’
२३ जना कलाकार राखेर गरिएको उक्त नाटक रेडिङ र हन्स्लोमा देखाइएको र दर्शकहरुले रुचाएको सनम बताउंछन् । तर विविध कारणले अझ पर्याप्त ठाउंमा देखाउन नसकिएको उनले गुनासो गरे ।
‘समय दृश्य’ गरिसकेपछि मानिसहरुले सोधिरहे अब के गर्ने योजना छ ? सनमलाई एक किसिमको ‘प्रेसर फिल’ भयो । उनले सोचे ‘जीगिषा’ बनाउंछु । सुवर्ण थापासंग मिलेर नेपालमै गरेका थिए उनले ‘जीगिषा’ । सनमले अलिकति परिमार्जन गरेर यूकेमा पनि जीगिषा देखाए जसलाई दर्शकले औधि रुचाए । ‘जीगिषा भनेको जित्ने इच्छा हो’, उक्त नाटकबारे सनम प्रष्टयाउंछन्, ‘सरकार माओवादी युद्धमा धेरैले ज्यान गुमाए । पछि माओवादी लडाकु शान्ति वार्तामा आए । विडम्बना नेताहरु सत्तामा पुगे तर तिनै मध्ये कति लडाकु अयोग्य ठहरिए । बन्दुक बोक्दा अयोग्य नहुने पछि अयोग्य भनेर तिनलाई घर न घाटको बनाइयो । नाटक यस्तै सेरोफेरोमा घुमेको थियो ।’
राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले रुचाएपछि बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०० वर्षको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित साताव्यापी कार्यक्रमका बेला पनि देखाइएको थियो ‘जीगिषा’ ।
बेलायतमा नाटकप्रति नेपालीको त्यति रुची नभएको सनमको गुनासो छ । ‘तर, उत्कृष्ट नाटक दिने मेरो प्रयास जारी रहन्छ’, सनम भन्छन्, यसबाट अहिले नै दाल, भात तरकारी खान पुग्दैन तर भविष्यमा व्यवसायिक बनाउन सकिने अठोटले म निरन्तर लागिरहेको छु ।’
उनले आगामी वर्ष आयो गोर्खाली नामक अंग्रेजी नाटक र फिल्म निर्देशन गर्ने योजना समेत सुनाए ।